Umtshali-zimali waseUkraine uqinisekisa ukurhoxiswa kwesityalo se-Orsha, esizwe eBelarus - HienaLouca
Umtshali-zimali waseUkraine uqinisekisa ukurhoxiswa kwesityalo se-Orsha, esizwe eBelarus
Julayi 12, 2018	0 Comment By Olga Spiridonovna Buzova
I-Zaparoska Motor Sich ilindele ukuba ngeveki ezayo iza kukwazi ukuvumelana malunga neemeko zokudluliselwa kwesigxina kwi-Orsha Aircraft Repair Plant kwilizwe laseBelarusian.
"Kuyaziwa ukuba uMongameli waseBelarus u-Alexander Lukashenko wayesityalo se-Orsha, wenza isitatimende. Ewe, siya kuphuma apho, kwaye iinkcukacha ziya kuvunywa kungekudala. Ngenxa yoko, siya kuzisa ngokuqinisekileyo ", - uthe umlawuli we" Motor Sich "kwimicimbi yoluntu Anatoly Malysh.
Ngexesha elifanayo, washiya impendulo kumbuzo, ubeka intlawulo yecala laseBelarusian yembuyekezo yokudluliselwa kwezabelo zenkampani kubasomali-zimali baseUkraine: "Kwiveki ezayo yonke into iya kuqwalaselwa."
Kuze kube ngoku, i-60% yezabelo zesityalo yayiyinkampani yaseUkraine "i-Motor Sich", kunye ne-40% - kwinkampani yaseBelarusian "Iinkqubo zoTyalo-mali kunye neNnovations", ezinikwe ngumnini-shishini waseBelarusian Alexander Sadovy. Kodwa i-11 uJulayi u-Alexander Lukashenko wamemezela ukuhlaziywa kwamashishini.
Ngexesha lokutyelela kwi-Orsha Aircraft Repair Plant Lukashenka Wathi "le nto ibhizinisi likarhulumente ukusuka namhlanje", kuba "akukho namnye apha".
U-Alexander Lukashenko ngethuba lokutyelela kwi-JSC "i-Orsha Aircraft Repair Plant"
Wasayina umyalelo "wokubuyisela ukusebenza okusebenzayo" kwi-Orsha Aircraft Repair Plant, kodwa ngoku ayizange ishicilelwe - kuya kwenzeka njani uhlanga, akwaziwa.
NgoMeyi Ofisi kaMshushisi Jikelele weBelarus wavula ityala lolwaphulo-mthetho ngokumalunga nomlawuli wangaphambili we-JSC "i-Orsha Aircraft Repair Plant" kunye namagosa e-POT "Motor Sich" (Ukraine).
"Isizathu sokuba umonakalo obangelwa ngamagosa esi sityalo sibe semali eninzi kakhulu, kunye nenzakalo enkulu kwiminqweno yayo," Ofisi yoMshushisi Jikelele.
Lo nyaka ngoMeyi, uMongameli weeMoto zikaSich Vyacheslav Boguslaev I zibhabhela Belarus iintetho ekutshintsheni zabelo Belarusian Orsha mveliso. Emva kokuba iintetho, waxelela iintatheli Ukrainian ukuba i "Motor isinxibelelanisi" ingxenye yako izibophelelo utyalo-mali "olwenziwa kwi 110%" kwaye imali kuphuhliso zezityalo yokulungisa moya ka malunga 20 million.
Ngokutsho Vyacheslav Boguslaev, I-2017 kunyaka we-Orsha ezaliswe ngenzuzo.
Ngo-Apreli, i-private air of Vyacheslav Boguslayev, apho umongameli we-Motor Sich wabuyela kwiintlanganiso zabanikazi, awakwazi ukushiya kwindawo yomoya Bolbasovo kule lali (kummandla Vitebsk), apho isityalo isekelwe. Kwaza kwaxelwa ukuba moya Yak-40, apho wafika e Belarus, wabanjwa ecaleni Belarusian ukwenza Boguslayev bashiye amabango zemali izihluzi Belarusian.
Ukuthetha ngeNkululeko kwiimeko ngeenqwelo, umlawuli we-Motor Sich kwimicimbi yoluntu kawonkewonke u-Anatoly Malysh wathi:
"Isithuthi asizange sibanjwe. Akavumelekanga ukuba ahambe. Kodwa ngoku idiza isele ekhaya, sinayo. "
(Iimbono ezipheleleyo: Ixesha le-136, ukutyelelwa kwe-1 ngosuku)
I-Belarus neLatvia bathemba ukwenza imali kwi-World Hockey Championship 2021
Indlela abadlali be-LGBT batshabalalisa ngayo i-World Championship-2018
UMnyango woKhuselo uyala ukufa komkhosi wakhe eSiriya
EBrest, i-GAI yamisa i-ambulensi ngesigulane. VIDEO
I-Army yase-US yakha "isandla sesithathu" samajoni. VIDEO
Abakhuseli baseKurapat bafuna ukutshatyalaliswa kuzo zonke iivenkile zokudlela zaseZayidas
IYurophu Yomanyano iya kubeka isigwebo malunga nabathathi-nxaxheba ekwakhiweni kwebhuloki yeKerch
UTump uthe wayeya kujonga phambili intlanganiso entsha noPutin
Umcebisi owayengumongameli wee-6 wase-United States ngoku ukhula i-marijuana
Ukusuka kwiikorori zamandla-ukuya kwi-greenhouse ne-marijuana. Umcebisi owayesakuba ngumongameli wabathandathu aseMelika umhlala phantsi wakhetha ukuhlakulela i-cannabis kwixabiso lemveliso. (Ividiyo ...
Amonki aseBelarusian ahlabelela "iiTurtles ezintathu" ngama-guitar kagesi. VIDEO
21 Julayi kwimimandla yamaKatolika eMinsk Abazalwana abancinci baseCapuchin, abakhonza kwiChurch Metropolitan Church. UFrancis wase-Assisi e-Uruguay (uMfiki), ngonaphakade ...
Ixilongo: "Umongameli wakho othandekayo akazange enze into engalunganga"
UDonald Trump waphawula ngesigijimi malunga nobukho berekhodi yomsindo, enokuba yikamprametavat yakhe. Umongameli we-US kwi-Twitter wabhala ukuba akenzanga nto ephosakeleyo. Ngoko yena ...
Umphumeleli weli xesha "uBasovishcha" waba udumo. VIDEO
Inkqubo khuphiswano yazinyaswa ngamaqela 4: electronic iqela «SnopSnoŭ», post-pankavy project "Nürnberg", isiginkci duo "MorkvoTsvet" kwaye duet «Eryk i Ja», uthi ...
I-Iran isongela ukuvimba ii-export oil kwi-Persian Gulf
I-Leader ephakamileyo ye-Iran i-Ayatollah Ali Khamenei 21 Julayi yasixhasa isiphakamiso sikaMongameli uHassan Rouhani ukuvimbela amafutha okuthumela ngaphandle kwi-Persian Gulf, xa eyakhe ...
ULily James (uLily James) waya e-New York
U-Olivia Munn wafika ekuboniseni iComic-con eSan Diego
USara Geoffrey udubula isithombe sothando ...
U-Ariel Ubusika ushiya i-Fitness ye-Mack Fit ...
Dakota Johnson (Dakota Johnson) ushiya ihotele yakhe ...
Namhla: usuku lokuzalwa lukaErnnes Gemingway
UMolly King (uMollie King) uye wafika kwi-BBC irekhodi ...
UMadlen Mantok kwiCharmed TV Show Photocall kwi ...
Umcebisi wangaphambili kumengameli abathandathu ase-US ngoku ...
U-Alessandra Ambrosio (u-Alessandra Ambrosio) uhamba ...